विदेश जाने विद्यार्थीको तथ्याङ्क पाउन कठिन छ ः रिजाल - eNepalikhabar.com
गृह विदेश जाने विद्यार्थीको तथ्याङ्क पाउन कठिन छ ः रिजाल
विदेश जाने विद्यार्थीको तथ्याङ्क पाउन कठिन छ ः रिजाल
नेपाल बाहिर उच्च शिक्षा पढ्न जान चाहने नेपाली विद्यार्थीलाई एकै ठाउँमा परामर्श दिने उद्देश्यले नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ (इक्यान)को आयोजनामा राजधानीको भृकुटीमण्डपमा जारी एजुकेसन फेयर २०१७ मा क्रमशः सहभागिता बढेको देखिन्छ । मेलाको दोस्रो दिन समग्र सहभागिता र स्टलहरुबारे इक्यानका प्रथम उपाध्यक्ष एवं काठमाडू इन्फोसिसका प्रबन्ध निर्देशक राजेन्द्र रिजालसँग इनेपाली खबरका लागि दीपेश गर्ताैलाले गरेको कुराकानी ः
मेलामा विद्यार्थीको चासो कस्तो छ ?
मेलामा विद्यार्थीको सहभागिता र आर्कषण छ । दोस्रो दिनमा समेत दोहो¥याएर विद्यार्थीहरु आइरहेका छन् । विदेश अध्ययन गर्न जाने सोच बनाएका विद्यार्थीले कुन देशमा जान कति खर्च लाग्छ ? कुन विषय पढ्दा राम्रो हुन्छ ?कहाँ पढ्दा राम्रो हुन्छ ?कसरी जाने भन्ने लगायतका विषयमा चासो राखेर उत्साहप्रद तरिकाले अवलोकन गरिरहेका छन् । आफूलाई चित्त नबुझेसम्म विद्यार्थीले विभिन्न स्टलमा गएर आफ्नो जिज्ञासा मेटाइरहेका छन् । कतिपय विद्यार्थील ेत कहाँ पढ्ने भन्ने निष्र्कष नै निकालेका छन् ।
विदेश अध्ययन गर्न जानुअघि विद्यार्थीले के कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ ?
सुरुमा त आफ्नो योग्यता कति हो ? आफ्नो आर्थिकस्तरका बारेमा पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ । पढ्न लाग्ने खर्च सुरुमै बुझेर जुटाउन सक्ने अवस्थामा मात्र जाने सोच बनाएर तयारी थाल्नुपर्छ । विदेशमा गएर चाहिँ अलपत्र पर्नुभन्दा पहिलानेै बुझेर जानु जरुरी छ । विदेशमा आफँै कमाउँदै पढ्नु पर्ने भएकाले परिपक्क भएर जान जरुरी छ । नर्वे, फिनल्यान्ड लगायतका देशमा चाहिँ छात्रवृत्ति प्राप्त हुने हुँदा त्यस्ता देशमा पनि कोसस गर्न सकिन्छ ।
विद्यार्थीले कस्ता देश र कस्ता विश्व विद्यालय छनोट गर्नुपर्छ ?
पढाई राम्रो हुने र अध्ययन गरिसकेपछि राम्रो रोजगारी पाईने विषय तथा स्थायी प्रवेशाज्ञा पाउन सकिने जस्ता विश्वविद्यालय छनोट गर्नुपर्छ । राम्रो गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास भएका विश्वविद्यालय छान्न सुझाव दिन्छु ।
कति शैक्षिक योग्यता भएका विद्यार्थीले विदेश अध्ययन गर्न जान सक्छन् ?
नेपालको हकमा प्रायःजसो माध्यमिक शिक्षा कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेकाले र त्यसभन्दा बडी अध्ययन गरेकाले विदेश अध्ययन गर्न जान सक्छन् । अष्ट्रेलिया जानको लागि ँ प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थी हुनुपर्ने छ । थोरै अङ्क ल्याएर पास गरेकाले जापान लगायतका देशमा अध्ययन गर्न जान सक्छन् । अष्ट्रेलिया, जापान, अमेरिकामा हालसम्म सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी गएका छन् ।
यस्ता शैक्षिक मेला संचालन गर्न कत्तिको सजिलो छ ?
हाम्रो देशमा जुनसुकै खालका मेला संचालन गर्ने कुरा निकै कठिन र गाह्रो छ । आधुनिक खालका संरचना र भवन नहुँदा खुल्ला ठाउँमा गर्न बाध्य भएका छौँ । पानी पर्दा हावाहुरी आउँदा मुस्किलले कार्यक्रम गर्नुपर्छ । ठूला होटलमा गर्दा व्ययभार बढ्न जान्छ । तथापि विविध समस्या तथा चुनौतीसँग सामना गरी विगत एघार वर्षदेखि वैदेशिक शिक्षामा जान चाहनेहरुका लागि सहि परामशर््ा दिन सफल भइरहेकाछौँ भन्ने लागेको छ ।
विदेश अध्ययन गर्न गएका विद्यार्थीको तथ्याङ्क कस्तो छ ?
शिक्षा मन्त्रालयले सही सूचना दिन नसक्दा एकिन तथ्याङ्क निकाल्न कठिन छ । वार्षिक चालीस हजार विदेश अध्ययन गर्न गएका भनिएपनि एउटै विद्यार्थीले “नो अब्जेक्सन लेटर” लिँदा तीनओटा समेत तथ्यााङ्क लिएर गणना हुने हुँदा सहि आँकडा नआएको हो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट गएकाजति विद्यार्थीको आँकडा राखियो भने सही तथ्याङ्क निस्कन्छ ।
(0.012403 seconds )